Global Voices teny Malagasy » Cambodge: Ny toe-javatra mazava mandritra ny fitsarana ny Khmer Rouge · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Avrily 2009 10:26 GMT 1	 · Mpanoratra Chhunny Chhean Nandika Lila
Sokajy: Kambodza, Lalàna, Tantara, Zon'olombelona
Naka feo ireo mpitarika tao amin'ny Khmer Rouge izay misalasala ny fahampian'ny porofo hanamelohana ireo mpikambana dimy mandritra ny fotoam-pitsarana ny Khmer Rouge  ny VOA Khmer . Nilaza ny heviny ny jeneraly Sok Pheap, niataka tamin'ny Khmer Rouge ny taona 1996,
Tsy fantatro izay mpamono olona; miaramila tany an'ala aho, ary rehefa niverina nody aho dia nanjavona avokoa ny fianakaviako, ary maty avokoa ny ankamaroan'ny mponina tao an-tanàna.
Mpikambana iray hafa, Meas Mouth:
Azo raisina ohatra ireo karandoha naderadera: tokony hahalala ny fitsarana hoe karandohan'iza no novonoin'ny Vietnamiana, an'iza no novonoin'ny mpandaroka baomba B-52, na izay tsy novonoin'ny Khmer Rouge.
Miombon-kevitra amin'izany toe-javatra izany ny mpisolo vava avy amin'ny Tetikasam-piarovana ny Kambôdziana satria efa 30 taona lasa izay no nisehoan'ny famonoana ka ho sarotra ny hanangonana porofo sy vavolombelona.
Na izany aza dia milaza i Youk Chhang ao amin'ny Foibe tahirin-kevitr'i Kambôdza fa an'arivony maromaro ireo antontan-taratasy voahangona mifandraika amin'ity ady namonoana olona ity.
Ho fanampin'ireo antontan-taratasy milaza ny zava-nisy ireo dia tsy hatao tsinontsinona koa ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo sisa tsy maty, ary tafiditra amin'izany ny any Long Beach any Californie, izay toerana nasiana ireo Kambojiana maro taorian'ny fandripahan'olona.
Manan-jo hitory amin'ny alalan'ny vondron'ny niharam-pahavoazana ao amin'ny Fitsarana manokana momba an'i Kambôdza ireo nahita faisana sy ny havany tamin'iny ady iny. Afaka jerena eto ny taratasy fenoina ho amin'izany fametrahana fitoriana izany.
Sary manatrika nalain'i Yarra64 tao amin'ny fonjan'ny Tuol Sleng ary mitondra ny fahazoan-dalana Creative Commons.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/04/03/2059/
 ny fotoam-pitsarana ny Khmer Rouge: https://globalvoicesonline.org/2009/03/31/cambodia-trial-begins-for-khmer-rouge-leader/
 Chhunny Chhean: https://globalvoicesonline.org/author/chhunny-chhean/